अब्बललाई नियुक्त गरौं ! - Karnalipatra
अब्बललाई नियुक्त गरौं !
कर्णालीपत्र संवाददाता ६ आश्विन २०७६, सोमबार १०:००
विश्वविद्यालय हाक्न चाहनेलाई आफूले नेतृत्व पाएमा कसरी विश्वविद्यालय हाक्ने हो, त्यसबारे विचार, कार्ययोजना सार्वजनिकरूपमा प्रस्ताव पेस गर्न लगाऔं र अब्बललाई नियुक्त गरौं ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी मुलकलाई शिक्षाको क्षेत्रमा योगदान दिने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हुन्छ । मुलुकको सिंगो शिक्षाको अवस्था विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरले चित्रण गर्छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था कमजोर हुँदा नेपालबाट बर्सेनि हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेसिने क्रम रोकिएको छैन । एउटा अध्ययनले भन्छ, ‘विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक कारण हो ।’
विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्ति पारदर्शी छैनन् । दलीय भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने गलत संस्कारको विकास हुँदै गएको छ । यस्तो गलत परम्पराले शिक्षा क्षेत्र नै तहननहस छ । राजनीतिक दबाबको कारण उपयुक्त व्यक्तिको चयन हुन नसक्नु विश्वविद्यालयहरूको अवस्था जर्जर हुनु मूल कारण हो । त्यसोः राजनीतिक दलमात्रै यसमा दोषी छैनन् । बौद्धिक मानिने प्राध्यापक पनि विश्वविद्यालयलाई दलीयकरण गर्नमा जिम्मेवार छन् ।
नेपालका धेरैजसो विश्वविद्यालयसहित सुर्खेतमा स्थापना भएको मध्यपश्चिमाञ्चल (मप) विश्वविद्यालयमा यतिबेला उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छ । लामो संघर्षपछि स्थापित विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको गलत संस्कारले पदाधिकारी नियुक्ति सुरुदेखि नै विवादित भए । जनअपेक्षाअनुसार विश्वविद्यालयले आफ्नो साख उँचो राख्न सकेन, नत शैक्षिक गुणस्तर नै माथि उठायो । राजनीतिक दाउपेचका कारण पटक–पटक तालाबन्दी र तोडफोड भइरहे । जसका कारण पदाधिकारीलाई काम गर्ने शैक्षिक वातावरण पनि भएन । मप विश्वविद्यालयमा मंगलबारदेखि उपकुलपति रिक्त भएको छ । वर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाको पदावधि सकिएसँगै नयाँ नियुक्तिको चर्चा सुरु भएको छ । उपकुलपतिमा नियुक्त हुन राजनीतिकरूपमा लबिङ सुरु भएको छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षपबाट मुक्त नगरेसम्म शैक्षिक गुणस्तरमाथि उकास्न सकिँदो रहेनछ भन्ने विगतका अनुभवले पनि भागबण्डालाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नभई प्राज्ञिकताका आधारमा पदाधिकारी चयनमा ध्यान दिनुपर्ने यो उपयुक्त समय हो ।
दल निकट प्राध्यापक संगठनको कुरा नसुनेर ती संगठनभन्दा बाहिर पनि विज्ञताका आधारमा उपयुक्त पात्रको खोजी गर्नुपर्छ । नेताको दैलोभन्दा धाउनेभन्दा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको रोष्ट्रर तयार पारेर त्यहीँ रोष्ट्ररका आधारमा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकेमात्र विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्छ । विद्यार्थी संगठनले मातृ दल निकट प्राध्यापकलाई पदाधिकारी नियुक्ति लबिङ गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्व पाउनेलाई आफ्नो समूह (रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन आदि) चयन गर्ने स्वतन्त्रता दिऔं । विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा गुणात्मक प्रकृतिको बनाउन पर्यत्न गरौं । विश्वविद्यालय हाक्न चाहनेलाई आफूले नेतृत्व पाएमा कसरी विश्वविद्यालय हाक्ने हो, त्यसबारे विचार, कार्ययोजना सार्वजनिकरूपमा प्रस्ताव पेस गर्न लगाऔं र अब्बललाई नियुक्त गरौं ।
६ आश्विन २०७६, सोमबार १०:००
सुर्खेत, ५ असोज (कर्णालीपत्र) । प्रहरीले वीरेन्द्रनगरमा ब्राउन सुगरसहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । वीरेन्द्रनगर–४, गैरीटोल निवासी शुक्रराज सारु मगरलाई ब्राउनसुगरसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । घरको कोठामा लुकाई राखेको अवस्थामा शुक्रबार एक ग्राम दुई सय मिलिग्राम (प्लास्टिकसहित) ब्राउन सुगर फेला परेको थियो । अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट […]
१६ पुष २०७६, बुधबार ११:२३
राराको बिरासतलाई ख्याल गरौ ।
१२ आश्विन २०७६, आईतवार ११:२४
सूचनाको हकको गम्भीर्यता
कुहिएको चामल वितरण गर्नेलाई कारबाही गर